မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပထမဆုံးအကြိမ် ကျင်းပမည့် လမ်းကြမ်းစီး ပြိုင်ပွဲတွင် ဝင်ပြိုင်ရန် ၅ဝ ကျေ?? - Yangon Media Group
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပထမဆုံးအကြိမ် ကျင်းပမည့် လမ်းကြမ်းစီး ပြိုင်ပွဲတွင် ဝင်ပြိုင်ရန် ၅ဝ ကျေ??
မန္တလေး၊ နိုဝင်ဘာ ၁၂
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပထမဆုံးအကြိမ်ကျင်းပမည့် လမ်းကြမ်းစီးဆိုင်ကယ်ပြိုင်ပွဲ Myanmar Enduro 2017တွင် ပြိုင်ပွဲဝင်ရန် ၅ဝ ဦးကျော် စာရင်းပေးသွင်းထားကြောင်း နိုဝင်ဘာ ၉ ရက် ပြိုင်ပွဲ ဝင်လျှောက်လွှာ စာရင်းပိတ်ချိန်ထိ ကောက်ခံရရှိသောစာရင်းများအရသိရသည်။ ”နိုဝင်ဘာ ၉ ရက်ကို စာရင်းပိတ်ခဲ့ တယ်။ အငယ်တန်းပြိုင်ပွဲနဲ့ အကြီးတန်းပြိုင်ပွဲတွေမှာ ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ဖို့ စာရင်းပေးသွင်းထားတာ မျှပါတယ်။ စာရင်းပေးသွင်းထားတာ စုစုပေါင်း ၅ဝ ဦးကျော်ရှိပါတယ်”ဟု Myanmar Eduro ပွဲစီစဉ်သူ ကိုအောင်ဝင်းထွန်းက ပြောသည်။
ပထမဆုံးအကြိမ် လမ်းကြမ်းစီးဆိုင် ကယ်ပြိုင်ပွဲကို နိုဝင်ဘာ ၁၈ ရက် နံနက် ၉ နာရီမှ ညနေ ၃ နာရီထိ မန္တလေးမြို့ ပုသိမ် ကြီးမြို့နယ် နေကာတောင်၌ ကျင်းပမည်ဖြစ် ပြီး အင်ဂျင်ပါဝါအလိုက် ပြိုင်ပွဲအမျိုးအစား နှစ်မျိုးဖြစ်ကာ အင်ဂျင်ပါဝါ ၁၂၅ စီစီမှ ၂၃ဝ စီစီရှိသည့် ဆိုင်ကယ်ပြိုင်ပွဲကို အငယ်တန်း ပြိုင်ပွဲနှင့် အင်ဂျင်ပါဝါ ၂၃၁ စီစီမှ ၄ဝဝ စီစီ အထက်ရှိသည့် ဆိုင်ကယ်စီးပြိုင်ပွဲကို အကြီး တန်းပြိုင်ပွဲအဖြစ် သတ်မှတ်ထားသည်။ ”ခရီးအရှည်က ၁၇ ဒသမ ၅ ကီလိုမီတာ ကွာဝေးပါတယ်။ ပြိုင်ပွဲကြာချိန်က မိနစ် ၅ဝ ကနေ တစ်နာရီဝန်းကျင် ကြာမြင့်မှာပါ။ ပြိုင်ပွဲဝင်တဲ့လူတွေအနေနဲ့ အာမခံကြေး ပေးသွင်းပြီးမှ ပြိုင်ခွင့်ပြုမှာပါ။ အာမခံကြေး တစ်သောင်း ကောက်ပါတယ်။ အာမခံ ကြေးသွင်းပြီး ပြိုင်ပွဲနေ့လာပြိုင်တဲ့အခါ အမှတ်တရအင်္ကျီနဲ့ လျှာထိုးဦးထုပ်တွေ ပေး သွားမှာပါ”ဟု ၎င်းကပြောသည်။
အဆိုပါ လမ်းကြမ်းစီးဆိုင်ကယ် ပြိုင်ပွဲတွင် အင်ဂျင်ပါဝါအလိုက် ပြိုင်ပွဲအမျိုးအစားနှစ်မျိုးစလုံးကို ပထမဆု ငါးသိန်း၊ ဒုတိယဆု သုံးသိန်း၊ တတိယဆု နှစ်သိန်း၊ စတုတ္ထဆု တစ်သိန်းနှင့် ပဉ္စမဆု ခုနစ်သောင်း ချီးမြှင့်မည်ဖြစ်ပြီး ဆိုင်ကယ်ပြိုင်ပွဲပြုလုပ် နေစဉ်လာရောက်အားပေးသူများအတွက် နေကာတောင်ခြေတွင် မည်သည့်ဆိုင်ကယ်များနှင့်မဆို ဝင်ပြိုင်ခွင့်ရှိသော အပျော်တမ်းလမ်းကြမ်းစီးပြိုင်ပွဲကို ထည့်သွင်းပေးထား ပြီး အမှတ်တရ ဆုတံဆိပ်များအပြင်ကံစမ်း မဲဖောက်ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
အမေရိကန်သံရုံးကို ဂျေရုစလင်သို့ တစ်နှစ်အတွင်းရွှေ့မည်မဟုတ်ဟု သမ္မတထရန့် ငြင်းဆို
(၂၁)ရာစု ပင်လုံ ဒုတိယ အစည်းအဝေးတွင် ရရှိခဲ့သည့် ပြည်ထောင်စု သဘောတူစာချုပ်၏ အစိတ်အပိုင်း ၃၇ခ??
တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းဝင်ခွင့်လျှောက်လွှာများကို သတ်မှတ်နှုန်းထားထက် ပိုမိုရောင်းချသည့် ကျောင်းအ
ဆုံရ ကြုံရ နိုင်ငံပိုင်သတင်းစာ သမားဘဝ(၈၈ အရေးအခင်း မတိုင်မီ ဖြစ်ရပ်များ)